Tsy vao voalohany ny tranga… : mpiadina iray maty avy nanao EPS Bacc | NewsMada
Par Taratra sur 28/07/2021
Nisehoana tranga tsy nampoizina indray ny adina fanatanjahantena ho an’ny bakalorea. Tovolahy iray namoy ny ainy, afakomaly taorian’ny niatrehany ny hazakazaka 1 000 m. Matetika miseho ny tahaka izao ho an’ireo mpanala fanadinana.
Tovolahy 19 taona mpiadina amin’ny bakalorea 2021, Razakarimanana Willy, mpianatry ny lycée Mananara-Ville, no namoy ny ainy, afakomaly maraina, taorian’ny fiatrehany ny adina fanatanjahantena ao amin’ny Cisco Mananara Avaratra, ny alatsinainy lasa teo. “Mbola nahavita hatramin’ny farany ny hazakazaka 1 000 metatra ity mpianatra ity », hoy ny lehiben’ny ivontoeram-panadinana, Rafanoharana Anthonio, fa teo am-pahatongavana izy no nanomboka reraka sy sempotra. “Niezaka nikarakara azy ny mpitsabo, hita ho nihatsara ny fahasalamany, saingy torana indray taorian’izany ka nalefa tamin’ny hopitaly, ary tsy tana intsony ny ainy, omaly”, hoy hatrany ity tomponandraikitra ity. “Halefa amin’ny tanindrazany eto an-dRenivohitra ny razana”, hoy ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Mananara Avaratra, i Mandray Armando Pascal.
Fanafoanana ny taranja…
Tsy vao ity ny tranga namoizana aina taorian’ny fiatrehana ny adina fanatanjahantena amin’ny bakalorea 2021. Tany amin’ny Cisco Moramanga ny fahafatesan’ny mpiadina iray vao haingana naterak’ity taranja ity ihany. Teo koa ireo mpiadina tovovavy mitondra vohoka tsy latsaky ny 10 tamin’ny foibem-panadinana teto Antananarivo tsy nahalala ny toe-batany raha tsy nandalo ny fizahan’ny mpitsabo. Safotra ny ankamaroany ary voatery hiatrika ny fanadinana am-bava izy ireo ho fanonerana ny adina teny an-kianja.
Saika isan-taona, amoizana aina ny adina fanatanjahantena amin’ny bakalorea noho ny antony tsy voafaritra mazava avy amin’ny mpitsabo. « Tsy vitsy ny mandray fanafody mampatanjaka vatana ka tsy zakan’ny fo ary miteraka ny fahafatesana », hoy ny teknisianina.
Nitarika adihevitra teny anivon’ny tambajotran-tserasera ny tokony hanafoanana ity taranja ity hisorohana ny aina afoy tahaka izao.